Tag: ngwa mkpanaaka | Martech Zone
Tag: ngwa mkpanaaka
Ndị na-ere ahịa maara aha nke ịgbakwunyeghị ọrụ n'ime ụlọ ọrụ CRM. Ọnụọgụ ọrụ ọrụ nwere ike ịdị obere dị ka 20%, na-eduga amụma amụma e mere dabere na data ahụ ga-apụ na 80%. LIID na-edozi nsogbu a site na ngwa ama ama na-enye ntinye ntinye data akpaka na ngwaọrụ iji mee ka ndụ dị mfe dị ka nyocha kaadị azụmahịa na ederede ederede na ederede. Ngwa mkpanaka LIID na-arụkwa ọrụ dịka onye inyeaka ahịa ahịa, na-echetara ya
Ọ bụghị ihe ijuanya na anyị na-ekerịta ihe ngosi ozi a n'ụbọchị anyị gara n'isi ụlọ ọrụ nke Bluebridge, ngwa ngwa ngwa mkpanaka dijitalụ. Anyị nwere ngwa mkpanaka siri ike, mana ụlọ ọrụ ahụ wepụrụ na mkpanaka, ma ugbu a, anyị ejiri ngwa mkpanaka mebiri emebi. Anyị maara na anyị anaghị efunahụ ụfọdụ site na ịmanye ọdịnaya anyị n'elu ikpo okwu. Anyị na-atụ anya inweta ụdị ọhụụ, Bluebridge nwekwara
Onye ọrụ ibe Ryan Cox kesara ihe omuma ihe omuma a, Kwalite ahia gi maka ndi ahia gi. Enwere ụfọdụ stats na-akwado m ga-ahụ n'anya karịa ozi na on dị ka 80% nke oge onye ọrụ mkpanaka na-eji ngwa. Ndi nke ahụ gụnyere email ha? Ana m eche ee. Kedu ụzọ ọ bụla, ọ bụ akwụkwọ ozi mara mma nke na-ese onyinyo doro anya. Enwere ike ịlaghachi azụmaahịa gị na-eche ụzọ ị ga-esi jekwuoro ya ozi